फेलिसिमोको 500०० पेन्सिल सजावटी तत्वको रूपमा सेट क्रिएटिव अनलाइन
मेलिसा पेरोटा | | कलाकारहरू, प्रेरणा, ट्रिक्स
के तपाईं कहिल्यै सोच्नुहुन्छ कि तपाईंसँग धेरै र colored्गीन पेन्सिलहरू छन् र यो लाजमर्दो कुरा हो कि तिनीहरू टाढा भण्डार गरिएको थियो वा केवल डेस्कको शीर्षमा बोरिएर? यस लेखमा हामी तपाइँलाई के देखाउँछौं रंगीन पेन्सिलको ब्रान्ड उनीहरूको उत्पादनहरू अधिक आकर्षक तरीकाले प्रदर्शन गर्नका लागि बनाइएको.
फेलिसिमो सन् १ 1992 XNUMX २ मा मैले सिर्जना गरेको एक ब्राण्ड हो संसारमा रंगीन पेन्सिलको सबैभन्दा ठूलो संग्रह। यो आवधिक अर्डरको आधारमा कार्य गर्दछ विशिष्ट प्यालेटमा सम्बन्धित २० र colors्गहरूको घर सेटहरू पठाउँदै। यी प्यालेटहरू ठोस, फ्लोरोसन्ट, पेस्टल, र धातु र colorsहरू समावेश गर्दछ। तिनीहरू प्रत्येक रंग-आकारको पेन्सिलको units०० एकाईहरू मिलेर बनेको हुन्छन् जुन र to्गको लागि प्रासंगिक नामको साथ प्रासंगिक छ।
एक अवसर मा र तपाइँको उत्पादन लाई ब्रान्डले सामरिक डिजाइन गरीएको आधारहरु संगठित गर्नुहोस् ताकि उनीहरु सजीलै प्रयोग गर्न सकिए। अर्कोतर्फ, यत्तिको पूर्ण स he्ग्रह भएकोले, उहाँ उनीहरूले आकर्षक सजावटको साथ सजावटको रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो।
आफ्नो र of्गीन स collection्ग्रहको लागि फेलिसिमोले सिर्जना गरेको पेन्सिल प्रदर्शनहरू हेरेर हामी देख्न सक्छौं कि कसरी उनीहरूलाई संगठनात्मक उद्देश्य पूरा गर्न सिर्जना गरिएको छ। यद्यपि उनीहरूले पनि व्यवस्थापन गरे एक धेरै रोचक कस्मेटिक माध्यमिक उत्पादन।
पेन्सिलहरू सामान्यतया हराइन्छ र खस्छ, जुन अन्तमा सिसा हानि गर्ने वस्तु हो। थप रूपमा, धेरै पटक केही रंगहरू प्रयोग गर्न रोकिन्छन् किनकि तिनीहरू दृश्यमान छैनन्। त्यसकारण, ब्रान्डले उपभोक्ताले दिने प्रयोगको बारेमा ध्यानपूर्वक सोच्यो। यस तरीकाले, यसले प्रणालीलाई प्रयोगलाई सरल बनाउन खोज्यो जुन उत्पादनलाई द्रुत रूपमा हेर्न र प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ।
1 अर्केस्ट्रा प्रदर्शन गर्नुहोस्
2 अरोरा प्रदर्शन
3 रंग रहर प्रदर्शन गर्नुहोस्
अर्केस्ट्रा प्रदर्शन गर्नुहोस्
सबैभन्दा साधारण प्रदर्शन - अर्केस्ट्रा »हुन सक्छ भित्ता प्रयोगकर्ता प्राथमिकता अनुसार माउन्ट गरियो। यसले पेन्सिलहरूलाई ठाडो रूपमा यी तेर्सो आधारहरूमा ठाँउमा राख्न अनुमति दिन्छ जुन एक अर्कासँग मिल्दछ।
Ing अर्केस्ट्रा »रंगहरू चढ्नका लागि प्रदर्शन गर्नुहोस्
अरोरा एक स्ट्यान्ड हो जुन pen०० पेन्सिल प्रदर्शन गर्न केहि भन्दा बढि सेवा गर्दछ। जस्तै काम गर्दछ एक प्रदर्शन केस जसले यी रंगीन तत्वहरूलाई समर्थन र संरक्षण गर्दछ शोकेस को एक प्रकार मा। यस तरीकाले यो कलाको समकालीन कार्य हुन्छ।
Felissimo रंग पेन्सिल भित्ता मा माउन्ट
रंग रहर प्रदर्शन गर्नुहोस्
यो प्रदर्शन सजिलो इम्बेडेड भागबाट बनेको हुन सक्छ पेन्सिलको साथ जैविक मूर्तिकला उत्पन्न गर्न हेरफेर र घुमाउरो बनाउनुहोस्। अर्कोतर्फ, यसले तपाईंलाई कति टुक्राहरू प्रयोग गर्न छनौट गर्न अनुमति दिन्छ, र color्गीन ब्लाकमा यसलाई ढुवानी गर्न सक्षम हुनको लागि निर्दिष्ट र range्ग दायरा चयन गर्नका लागि आदर्श भएको। यसले तपाईंलाई सजिलै ह्यान्डलिंगको लागि सम्पूर्ण संग्रह रोल अप गर्न अनुमति दिन्छ।
फेलिसिमो पेन्सिलहरूको लागि वेभ धारक
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » फेलिसिमोको 500०० पेन्सिल सजावटी तत्वको रूपमा सेट भयो